people Nepal » प्याजको चमत्कार ! प्याजको चमत्कार ! – people Nepal
प्याजको चमत्कार !
प्याजले हाम्रो खानाको स्वाद बढाउनुका साथै हामीलाई थुप्रै रोगबाट पनि बचाउँछ । हामीले प्याजलाई औषधी भन्छौं भने त्यसमा केही गल्ती हुँदैन । प्याजमा कोलिसिन र रायबोफ्लेविन ,भिटामिन बी० पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ । यतिमात्र होइन प्याजमा जिवाणुरोधी, तनावरोधी, पीडा निवारक, पत्थरी, गाँठा, लू, मधुमेह र थुप्रै अन्य रोग पनि नियन्त्रण गर्ने शक्ति रहेको हुन्छ । आज हामी तपाईंलाई प्याजले हाम्रो कानका लागि कस्तो प्रकारको फाइदा पुर्याउँछ भन्ने बारे जानकारी दिँदै छौं ।
तपाईंले योभन्दा पहिले प्याजलाई मोजामा राखेर सुत्नुका फाइदा बारे पढ्नुभएको होला । विज्ञानले पनि यो कुराको मान्यता दिएको छ कि मोजामा प्याज राखेर सुत्दा हामीले थुप्रै प्रकारको स्वास्थ्य लाभ पाउँछौं । वास्तवमा प्याजमा पाइने फस्फोरिक एसिड रगतको धमनीमा छिरेर रगतलाई शुद्ध बनाउने काम गर्दछ । यसका साथै, जसको जुत्ता–चप्पल लगाएपछि खुट्टा गन्हाउने समस्या छ भने त्यसलाई जरैदेखि उखेल्ने गर्दछ । तर प्याजलाई कानमा राखेर सुत्दा तपाईं थुप्रै रोगबाट बच्न सक्नुहुन्छ । जो मानिसहरुदाई कानमा पीडा वा पोल्ने समस्या छ भने यो तरिकाले निकै फाइदा प्रदान गर्दछ ।
उपायः प्याजलाई सफासँग पखाल्नुहोस् । प्याजलाई काटेर यस्तो आकार दिनुहोस् कि त्यो कानभित्र पनि नछिरोस् र सुत्नेबेला बाहिर पनि नखसोस् । अब यो टुक्रालाई सुत्नुभन्दा पहिले कानमा राख्नुहोस् । रातभरी यसरी राख्नुहुन्छ भने बिहान उठ्दा तपाईंको कानको समस्या निकै हल्का हुन्छ ।
यसका साथै यो तरिका अपनाउँदा कानमा हुने जलनबाट पनि छुटकारा पाइन्छ । केहि दिनसम्म यो तरिका अपनाउँदा कानसम्बन्धि सबै समस्याबाट छुटकारा पाउनुहुन्छ ।